30 Ane Simba reMweya Mutsvene Minyengetero yeMidziyo | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Ane Simba Emweya Wakachena Minyengetero minamato
Vaheberi 12:29 Nekuti Mwari wedu moto unoparadza.
The Mweya Mutsvene Moto ndewechokwadi. Ndiwo moto waMwari unopisa mabasa eseadhiyasi muhupenyu hwako. Nhasi tichave tichiita makumi matatu emasimba eMweya Mutsvene minamato yemunamato. Iyi minamato yemunamato ndeinogumburisa minamato yemadhaini ayo anozunungusa humambo hwe rima muhupenyu hwako. Mwari wedu rudo uye anoratidza Iye zvaasina magumo rudo kune vese, Iye zvakare anochengetedza avo vakaMugamuchira Negodo. Paul MuApostora paakanga ari munzira yekubvisa maChristu muJerusalem, Mwari vakamusunga ndokumurova neupofu, mambo Herode pavakauraya James ndokuita chinhanho pana Peter, Mwari vakatumira Mutumwa kunosunungura Peter uye iyewo Mutumwa akauraya Herodi zuva rinotevera. Iyi inoyera ghost moto munamato mapoinzi achange achisunungura ngirozi mumusasa wevavengi vako kuti aparadze mabasa avo ese kupesana nehupenyu hwako uye destiny muzita raJesu.
Patinonamata Mweya Mutsvene mweya minamato mapoinzi, tinosunungura vatumwa vane moto kuti vashande, Ngirozi dzaIshe mwenje wemoto, VaHeberu 1: 7 inotitaurira. Ngirozi idzi dzinosunungurwa kuhondo kuti dzitirwire. Chero iwe paunoona maKirisitu vachinamata nekupopota 'mweya mutsvene mweya' ivo havasi kuseka, moto waMwari unoparadza ndewechokwadi, uye unosunungurwa nengirozi dzinopisa kuti dziparadze huipi hwese hwakadyarwa muhupenyu hwedu nadhiyabhori. Nzira yakanakisa yekuparadza humbowo ndeyemoto, nenzira imwecheteyo, chipi zvacho chakadyarwa naDhiyabhorosi muhupenyu hwako seuchapupu, mweya mutsvene wemoto uchauparadza kuita madota muzita raJesu. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato nekutenda uye nekutsamwa kutsvene nhasi, uye iwe uchaona zvese zvasatani zvinopesana newe zvinotsva kuita madota nemoto waMwari muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekutitumira iwo Mweya Mutsvene uye Simba muzita raJesu
2. Baba ndinopinda mune chenyu chigaro cheshe nenyasha zvino kuti mugashire ngoni nenyasha kuti murambe muchienda muzita raJesu
3. Oh Mwari simuka uparadzire vavengi vangu vese nevadzivisi vangu muzita raJesu
4. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene pane urongwa hwese hwadhiabhori hunopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
5. Ini ndinosunungura iwo Holy Ghost Fire pamusoro pekunze kwese kwerima kunopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
6. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene pane zviitiko zvese zveuroyi zvinopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
7. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene pane zvese zvinopesana naSatan zvinopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
8. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene pane zvese zvakashata zvinopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
9. Ini ndinosunungura iwo Holy Ghost Fire pamasimba ese erima achirwa newangu ekuroora muzita raJesu.
10. Ini ndinosunungura moto weMweya Mutsvene kunopesana nevese vemauto vehondo yemagungwa vachirwira imba yangu muzita raJesu.
11. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene pamusoro pemasimba ega madhimoni anorwisa kufambira mberi kwangu muzita raJesu.
12. Ini ndinosunungura iwo Holy Ghost Fire pane yega wtchsters chibvumirano chinorwisa muchato wangu muzita raJesu.
13.Ndinosunungura iwo Holy Ghost Fire pamweya wega wekusabereka muzita raJesu.
14. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene pamweya wega wega usingafungidzirwe muzita raJesu.
15. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene pamusoro peMweya wega wekusimuka unopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
16. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene kupesana nekudyidzana kwese kwemadzitateguru angu mumadzitateguru angu muzita raJesu.
17. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene kupokana nesungano dzose dzakaipa dzichirwisa hupenyu hwangu muzita raJesu.
18. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene kupesana nemhando dzose dzekusamira dzichitarisana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
19. Ini ndinosunungura moto weMweya Mutsvene kupokana nekumwe kutaura kwakaipa kunoshanda kunopesana nehupenyu hwangu muzita raJesu.
20. NeMoto weMweya Mutsvene, dzoka kune uno tuma museve wega weadhiabhori wakanangwa nehupenyu hwangu muzita raJesu
21. NeMweya Mutsvene Moto, Ini ndinodya Urombo Muhupenyu hwangu muzita raJesu
22. NeMweya Mutsvene Moto, ini ndinopedza kukundikana Muhupenyu hwangu muzita raJesu
23. NeMweya Mutsvene Moto, ndinopedza kushaya Muhupenyu hwangu muzita raJesu
24. NeMweya Mutsvene Moto, ini ndinopedza chirwere Muhupenyu hwangu muzita raJesu
25. NeMweya Mutsvene Moto, Ini ndinopedza kudzokera kumashure Muhupenyu hwangu muzita raJesu
26. NeMweya Mutsvene Moto, Ini ndinopedza Kutukwa kwakazara Muhupenyu hwangu muzita raJesu
27. NeMweya Mutsvene Moto, Ini ndinodya yakaipa maitiro Muhupenyu hwangu muzita raJesu
28. NeMweya Mutsvene Moto, Ini ndinodya mhanje Muhupenyu hwangu muzita raJesu
29. NeMweya Mutsvene Moto, ndinopedza zvese zvakaipa zvakaiswa nasatani Muhupenyu hwangu muzita raJesu
Ndatenda baba, nekuti zvirokwazvo uri moto unoparadza.
Previous nyayaPfungwa dzeMunamato Kune Vashandi MuChechi
inotevera30 Minamato Yekunamatira YePfungwa dzeBhizinesi
Gladys Zvita 21, 2019 At 1:48 pm
Iyi minamato ndeyecatholic kana yevatendi munamato?
Danielle lee Ward Zvita 5, 2020 At 6:17 am
NDINOSHAMISIKA KANA IWE NDIYE MESIYA ANODZIDZWA HANUMAN SEAVATAR YEMAVISHNU, Ini ndinonzi Danielle lee wadhi… ndinonetsekana nezvakaipa asi ndinotenda kuti NDIRI KUUYA NENYAYA DZAKACHENA NDINOCHENESA KUTENDA KUNAI KUVA NENYAYA. RAMBA UCHIKOSHESA BASA RAKANAKA RAMWARI… .IYO MAZWI NGAVE NEWE ... Ida mukadzi mutema mumatunhu eUSA .. ..
20 Hondo Munamato Pfungwa Matanho Ekuporesa Varwere